औषधी बजार Archives – healthykhabar.com
काठमाडौँ,२२ पुस। सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको पदमा रौतहटका मोहम्मद सफिउल्लाहलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको बाणिज्य,आपूर्ति तथा उधोग मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार मोहम्मद सफिउल्लाह नियुक्त गरेको हो । महाप्रवन्धक पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ ३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मन्त्रालयद्धारा गठित महाप्रबन्धक छनोट तथा सिफारिस समितिले ह्वाङ्दी ८, गुल्मीका अर्जुन अर्याल, राजपुर २, रौतहटका मोहम्मद सफिउल्लाह र महालक्ष्मी ८, ललिपुरका राजकुमार थापा गरी ३ जनालाई महाप्रबन्धकको पदमा सिफारिस गरेको थियो । तीन जना मध्यबाट सफिउल्लाह नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुनुभएको हो।
काठमाडौं । फाइजरको कोरोना भ्याक्सिन लगाएकी एक महिला स्वास्थ्यकर्मीको पोर्चुगलमा मृत्यु भएको छ। ४१ वर्षीया महिला स्वास्थ्यकर्मीको भ्याक्सिन लगाएको दुई दिनपछि मृत्यु भएको हो। पोर्चुगलको पोर्टो शहरमा बस्ने सोनिया एकेवेडोको फाइजरको भ्याक्सिन लगाएको करिव ४८ घन्टापछि नयाँ वर्षको दिन अचानक निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सोनिया असेवेदो क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्थिन्। उनी दुई बच्चाकी आमा हुन्। डेलिमेलमा छापिएको समाचार अनुसार फाइजरको भ्याक्सिन लगाएपछि उनमा कुनै साइड इफेक्ट भने देखिएको थिएन। सोनियाका पिता अबिलियो असेवेदोले एक स्थानीय मिडियासँग कुरा गर्दै खोप लगाएपछि आफ्नी छोरीको हालत सामान्य नै रहेको बताएका छन्। तर, उनले आफ्नी छोरीको मृत्यु के कारणले भएको हो भन्ने जान्न खोजेको बताएका छन्। उनले ३० डिसेम्बरमा भ्याक्सिन लगाएको बताइएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
लण्डन। बेलायतका वैज्ञानिकहरूले कोभिड–१९ बाट आपतकालीन रक्षा गर्न सक्ने विश्वास गरिएको एउटा औषधि विकास गरिएको बताएका छन्। यद्यपि उक्त औषधि हाल परीक्षणको क्रममै रहेको बताइएको छ। बेलायती औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको एन्टिबडी उपचार औषधि खासगरी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आइसकेका र खोप दिन ढिलो भइसकेका मानिसमा उपयोगी हुनसक्ने बताइएको छ। सङ्क्रमित बिरामीलार्ई यो औषधि दिँदा कोभिडको गम्भीर बिमारी हुनबाट जोगाउन सकिने ठानिएको छ। अहिले यो औषधि अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेको बताइएको छ। यो चरणअन्तर्गत पहिलो १० व्यक्तिलाई बेलायतमा उक्त औषधिका मात्रा दिइएको छ। यो परीक्षणमा सहभागी गराइएका प्रमुख समूहहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अस्पतालमा रहेका बिरामी तथा दीर्घकालीन उपचारसेवामा रहेका आश्रितहरू रहेका स्वास्थ्य विज्ञहरूले जनाएका छन्। प्रभावकारी पाइएमा सुईमार्फत् दिइने यो औषधिले खोप लगाउन नभ्याइएका वा नहुने जोखिम वर्गका मानिसलाई रक्षा गर्ने ठानिएको छ। साथै यसले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउने ठानिएको छ। बेलायतको यूनिभर्सिटी कलेज लन्डन हस्पिटल्स (यूसीएलएच) एनएचएस ट्रस्टमा भइरहेका परीक्षणमा दुई भिन्न प्रकारका एन्टिबडी तत्त्वहरूलाई सुईमार्फत् दिँदा कोभिडको सम्पर्कमा आएका…
काठमाडौं,७ पुस। नेपाली कम्पनी क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर टिएसि टु— ०१५ को असिफिक्स (रेब्राजोल सोडियम) २० एमजीको ट्याब्लेट विक्री विवरणमा रोक लगाइएको छ। असिफिक्स ट्याब्लेटको प्रयोगको पेटको अल्सर तथा पेट फुल्दा प्रयोग गरिन्छ।औषधि व्यवस्था विभागले एक औषधिको विक्री–वितरणमा रोक लगाएको सूचना प्रकाशित गरेको छ। नियमित बजार अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएका ती औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको हो। उल्लेखित उत्पादन औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।
बीबीसी । यूकेमा कोरोनाभाइरसको एउटा नयाँ प्रकार देखिएपछि थुप्रै देशहरूले त्यहाँको यात्रामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्न थालेका छन्। नयाँ प्रकारको भाइरस झन् सङ्क्रामक र नियन्त्रणबाहिर गएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। आयरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, द नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमले यूकेबाट हुने उडानहरूमाथि रोक लगाइरहेका छन्। देश अनुसार कदमहरू केही फरक छन्। फ्रान्सेली कदमबाट युरोटनेलमार्फत्‌ हुने रेल सेवा पनि प्रभावित भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारलाई लिएर यूकेका अधिकारीहरूसँग ‘नजिकको सम्पर्कमा’ रहेको जनाएको छ। पहिलाको भन्दा नयाँ प्रकारको भाइरस झन् तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताइएको छ। यद्यपि त्यो धेरै घातक नभएको ठानिएको छ। यूकेमा बाहेक कोरोनाभाइरसको यस किसिमको म्यूटेशन अर्थात्‌ उत्परिवर्तन द नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा पनि देखिएको डब्ल्यूएचओले बताएको छ। कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारले अहिले बनेका खोपप्रति फरक प्रतिक्रिया देखाएको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। तीव्र गतिमा देखिएको भाइरस फैलिने क्रमलाई रोक्ने प्रयासमा अहिले यूकेमा लन्डनसहित दक्षिण-पूर्वी इङ्ग्ल्यान्डको ठूलो हिस्सामा कडा खालका प्रतिबन्धात्मक कदम चालिएका छन्। यसै महिनाको शुरूतिर केही नमुनाहरू…
फार्मेसी परिषदद्धारा नाम दर्ता प्रमाणपत्र वितरण सुरु
काठमाडौं,२६ मंसिर । नेपाल फार्मेसी परिषदले सञ्चालन गरेको १५ औं नाम दर्ता परीक्षाको नाम दर्ता प्रमाणपत्र शुक्रबारदेखि वितरण सुरु गरेको छ । डिप्लोमाका करिब ४ सय र ब्याचलरका २ सय ४५ जना फार्मासिस्टलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको परिषदका रजिस्ट्रार संजीव कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको परीक्षा असोज १० गतेदेखि प्रदेशस्तरीय रुपमा सञ्चालन भएको थियो। लकडाउन र कोरोना महामारी नभएको भए फार्मेसी परिषदको परीक्षा चैत र साउनमा सञ्चालन हुने गर्थ्यो। परिषदले चाररचार महिनाको अन्तरालमा वर्षको तीन पटक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
अब एन्टिजेनबाट कोरोना परीक्षण,२० मिनेटमा रिपोर्ट आउने
काठमाडौं,१५ मंसिर । आजबाट एन्टिजेन विधिमार्फत कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको बताएको छ । पहिलो चरणमा तीनहजार पाँचसयजनाको एन्टिजेनबाट कोरोना परिक्षण गरिनेछ । सोमबार पाँचसय जनाको परिक्षण गरिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका हटस्पट क्षेत्रमा कोरोना परिक्षण गरिनेछ । ती क्षेत्रहरुमा कोटेश्वर,विशालनगर,चाबहिल,मित्रपार्क,बालाजु लगायत छन् । उहाँले एन्टिजेनबाट २०,२५ मिनेटमै कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट आउने बताउनुभयो । एन्टिजेनमा पपिसिआर जस्तै विधि हो ।
काठमाडौ,१४ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएकाे चुनावबाट केमिकल एण्ड मेडिकल सर्जिकल सप्लायर्स एसोसियएसन अफ नेपाल (केमसान) को प्रतिनिधि केमसानका पुर्व अध्यक्ष भक्त बहादुर हमाल निर्वाचित हुनुभएको छ। हमालले एकसय एक मतमा ६२ मत प्राप्त गरि विजयी हुनुभएको हो। चन्द्र प्रसाद ढकालको समुहबाट वस्तुगत तर्फ कार्यसमिति सदस्यमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति व्यवसायीहरुको छाता संगठन केमिकल एण्ड मेडिकल सर्जिकल सप्लायर्स एसोसियएसन अफ नेपाल (केमसान)को प्रतिनिधित्व गर्दै केमसानका पुर्व अध्यक्ष भक्त बहादुर हमालले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। १४ कार्यकारी सदस्यमा ७ जना किशोरकुमार प्रधान प्यानलबाट र ७ जना चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यालबाट निर्वाचित भएका छन्। यी हुन् विजयी उम्मेदवार नरेश लाल श्रेष्ठ ७२ सुमित कुमार केडिया ६६ आकाश अधिकारी ४९ प्रकाश सिंह कार्की ५७ भक्त बहादुर हमाल ६२ सुबोध कुमार गुप्ता ५० हेमराज ढकाल ५५ अरनिको राजभण्डारी ६४ गोबिन्द ढुंगेल ५० मनिष लाल प्रधान ६० मीनमान श्रेष्ठ ६७ विष्णु प्रसाद गैरे ५१ सन्दिप कुमार अग्रवाल ५१ सुकुन्तलाल हिराचन ५५
काठमाडौं,४ कात्तिक । नागरिक अगुवाहरूले नेपाली जनताले उपचार पाउने संवैधानिक हकबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न क्षेत्रका ५३ जना नागरिक अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश विपरीत हुने गरी हालै सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च सरकारी संक्रमितले नै व्यवहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी जनस्वाथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखिएको छ। नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरु, महासंघ तथा संजालको तर्फबाट १। जितराम लामा…
काठमाडौं,३० असोज । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधि आयात तथा बिक्री वितरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक भारतीयसहित तीन वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भारतीय कम्पनी सिप्लाबाट उत्पादिन रेम्डेसिभिर ल्याउने आधिकारिक एजेन्सी यति फर्माकेम डिस्ट्रीव्युटरर्स प्रालि, माइलन ल्यावरोटोरिजबाट उत्पादित रेम्डेसिभिर ल्याउने एजेन्सी सिनर्जी ओभरसिज प्रालि र हिटेरो कम्पनीको औषधि ल्याउने भिगोविस लाइफस सान्इस लिमिडेटलाई तोकेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा कोभिड १९ को उपचार गर्ने अस्पतालहरुले बिरामीका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक परेमा चिकित्सकको सिफारिस अनुसार औषधि व्ययस्था विभागले सूचिकृत गरेको कम्पनीबाट सहज रुपमा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त पत्रमा उक्त तीन कम्पनीका प्रमुखहरुको नाम र मोबाईल नम्बर सहित उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना ः
काठमाडौं,२९ असोज । औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा भरत भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उहाँलाई विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । भट्टराई केही समय अघि मात्र ११ औं तहमा बढुवा हुनुभएको थियो । यसअघि औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकाल हुनुहुन्थ्यो । भट्टराई बिहीबार मन्त्रालयबाट महानिर्देशकको पत्र पाउनुभएको हो । निवर्तमान महानिर्देशक ढकालको सरुवा विभागअन्तरर्गतकै राष्ट्रिय प्रयोगशालामा भएको छ ।
काठमाडौँ,१२ असोज । औषधि व्यवस्था विभागले थप ९ वटा कम्पनीको ह्यान्ड स्यानिटाइजर माथि प्रतिवन्ध लगाएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणमा मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने विषाक्त रसायन मिथानोलको मिश्रण भएको पाइएकोले ति ह्याण्ड स्यानिटाइजरमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको विभागले जनाएको छ । जसमा हर्बल एण्ड रब, कुम ह्यान्ड स्यानिटाइजर, क्लिन ह्याण्ड स्यानिटाइजर र कुमकुम इन्स्टान्टका स्यानिटाइजर छन्। यस्तै इन्स्टान्ट ह्याण्ड स्यानिटाइजर जेल, इन्स्टान्ट ह्याण्ड स्यानिटाइजर ओर्जिनल, साधना इन्स्टान्ट, ड्रोनी एलो कलर र ड्रोनी कलरलेस स्यानिटाइनर सर्वसाधारणलाइए प्रयोग नर्गन विभागले अनुरोध गरेको छ। सोमबार ती ९ सेनिटाइजरको नामको सूचीसहित विभागले सूचना प्रकाशन गरी तिनको प्रयोग र बिक्रीरवितरण नगर्न र नगराउन निर्देशन समेत दिएको छ।
यी १५ अस्पतालबाट निशुल्क उपचार गर्न पाईने
काठमाडौँ,७ असोज । विपन्न वर्गलाई आकस्मिक उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने सरकारको नीति अनुसार सरकारले देशभरका १५ वटा सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सेवा निःशुल्क गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निःशुल्क सेवा प्रारम्भ गरेको हो  । पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निशुल्क आकस्मिक सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको हो । अकस्मिक उपचार निशुल्क दिनुपर्ने अन्य अस्पतालहरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, बीपी कोइराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडिज, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, कोसी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क आकस्मिक सेवा…
फार्मेसी काउन्सिलले प्रदेश स्तरीय लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं,२८ भदौ । नेपाल फार्मेसी परिषदले पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको परीक्षा असोज १० गतेदेखि प्रदेशस्तरीय सञ्चालन गर्न काउन्सिलले सूचना जारी गरकोे छ । परिषदले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड १९ सम्बन्धी सुरक्षा निर्देशिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ। असोज १० गते बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा, १४ गते प्रदेश ५ को बुटवलमा, १७ गते कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेपालगञ्जमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। यस्तै, असोज २० गते प्रदेश १ को विराटनगरमा, २३ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा र २७ गते प्रदेश २ को जनकपुरमा परीक्षा सञ्चालन हुने परिषदले जनाएको छ। परिषदका रजिष्ट्रार सञ्जिव पाण्डेलेपरीक्षाको प्रवेश पत्र असोज ६ गतेबाट वितरण गरिने बताउनुभयो । काठमाडौंमा एकै पटक परीक्षा सञ्चालन गर्दा कोरोनाको जोखिम हुने भएकाले प्रदेश अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । १५ औं लाइसेन्स परीक्षामा ब्याचलर फार्मेसी तर्फ ७ सय ४ र डिप्लोमा फार्मेसी तर्फ ९ सय ३ गरी १…